Intee Le'eg Tahay Rajada Doorasho Ee Saciid Deni? - Wararka Maanta
Intee le’eg tahay rajada doorasho ee Saciid Deni? – Wararka Maanta
Muqdisho (Wararka Maanta) – Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullahi Deni ayaa ku jira olole doorasho oo aan shaacsaneyn, oo uu ku doonayo xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Deni ayaa inkasta oo uusan weli si rasmi ah u shaacin damaciisa, haddana wuxuu qaadayaa tallaabooyin si cad u muujinaya inuu doonayo inuu la wareego kursiga uu hadda ku fadhiyo madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo.
Sababta Deni uusan weli ugu dhowaaqin musharaxnimadiisa madaxweyne, ayaa ah inay su’aal gelin karto dhex-dhexaadnimadiisa doorashada xildhibaanada Aqalka Sare iyo kuwa golaha Shacabka ee uu maamulkiisa qabanayo.
Si kastaba, Deni wuxuu wadaa dadaallo uu taageero ugu raadinayo ololihiisa doorasho, kuna xaqiijinayo soo saarista xildhibaan daacad u ah oo codka siiya.
Qorshaha Deni ayaa ah in inta badan xildhibaanada kasoo baxaya Jubaland iyo Puntland ay noqdaan kuwa isaga taageersan, maadaama doorashooyinkaas ay maamulayaan isaga iyo saaxiibkiis Axmed Madoobe.
Wararka Maanta : Ilhaan Cumar oo soo saartay dalab la xiriira duqeyntii gobolka Mudug -...
Ilo wareeeyo kala duwan ayaa Wararka Maanta u sheegay in Saciid Cabdullaahi Deni uu dhigiisa Jubaland Axmed Madoobe kala hadlay in uu ka shaqeeyo sidii ay doorashada Jubaland ugu soo bixi lahaayeen Xildhibaano lagu kalsoonyahay oo uu ka heli karo codad.
Deni ayaa Axmed Madoobe ka dalbaday in uu meesha ka saaro Xildhibaanada hadda jira ee aan lagu kalsoonaan karin, islamarkaana uu keeno kuwa dhiig cusub ah oo lagu kalsoonyahay.
Sidoo kale, degaanada Puntland ayaa la sheegay in uu Saciid Deni ku dadaalayo sidii uu uga soo bixin lahaa xildhibaano daacad u ah, oo uu gacantiisa kusoo saaro.
Taageerada Jubaland iyo maamulkiisa ayaa Deni gelineysaa rajo weyn, wuxuuna rumeysan yahay inuu si fudud uga soo gudbi karo wareegga koowaad ee doorashada oo ah kan ugu adag.
Marka la isku geeyo, xildhibaanada Aqalka Sare iyo Golaha Shacabka, waxaa Puntland iyo Jubaland lagu dooranayaa in ka badan 100 xildhibaan, waxaana qorshaha Deni uu yahay inuu intooda badan gacanta ku dhigo.
Wararka Maanta : Puntland oo shaacisay natiijada imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare
Tani waxay Deni siin karta waddo fudud oo uu uga soo gudbo wareegga koowaad ee doorashada madaxweynaha oo ah kan ugu adag. Caadiyan waxaa wareegga koowaad looga gudbaa codadka 30 illaa 40 xildhibaan.
Haddii Deni uu kasoo gudbo wareegga koowaad, waxay kadib guushiisa ku xiran tahay cidda ay is-wajahayaan, waxaana doorashooyinkii hore laga bartay in mar kasta musharax cusub uu ka guuleysto kuwa xilalka soo qabtay ama markaas ku fadhiya.
Si kastaba, ololaha doorasho ee Deni ayaa caddeyn u ah in khilaafkii hareeyey doorashada Soomaaliya ee muddada dib u dhigay uu sabab u ahaa damac shakhsi.
Sidoo kale, waxay tani su’aal gelineysa in Deni uu maamuli karo doorashada xildhibaanada, maadaama uu yahay musharax.
Wararka Maanta : DF oo ka carootay warbixin Midowga Afrika uu kasoo saaray afartii sano...
Arrintan ayaa waxaa horey uga hadlay wasiirka qorsheynta Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan.
Jamaal ayaa sheegay in madaxeyne Deni uu dib u dhigay shaacinta inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynimo ee Soomaaliya, islamarkaana uu qorsheenayo inuu faragelin ku sameeyo doorashada xildhibaanada ee ka dhaceysa Puntland, sida uu hadalka u dhigay.
Jamaal ayaa sidoo kale dalbaday in maadama uu yahay musharax madaxweyne, Siiciid Deni uu faraha kala baxo dhammaan arrimaha la xiriira doorashada, oo uu si degdeg ah u joojiyo faragelinta arrimaha guddiyada farsamada doorashada, sida uu hadalka u dhigay.
Si kastaba, Tartanka doorashada Soomaaliya ayaa sanadkaan u muuqdo in leeyahay xiiso gaar ah, waxaana isku haya musharaxiin miisaan culus leh, manna cidda weli cidda ku horeysa ee ku guuleysan doonta.
Hoos ka daawo warbixintan oo muuqaal ah.
General Saadaq John oo kasoo muuqday jiidaha dagaalka Bacaadweyn ee…
Gabadh 13 jir ah oo u geeriyootay gudniinka Fircooniga ah oo lagu sameeyay
Guddoomiyaha Baarlamaanka Koofur Galbeed oo magacaabay Guddiga qabashada…
Wada-hadal guuldareystay oo Xalay Zoom-ka ku dhex maray Rooble & Maamu…
Guddiga xallinta khilaafaadka doorashada oo soo bandhigay sharuudaha…
Dib u dhac ku yimid doorashada Aqalka sare iyo Beesha Caalamka oo shur…
Gabar Soomaali la la’aa oo meydkeeda laga helay Magalada Minneapolis -…
Maraykanka oo difaacay duqeymihii uu fuliyay Soomaaliya todobaadkii hore
Axad, Luulyo, 25, 2021 (Wararka-Maanta) – Guddoomiyaha Baarlamaanka maamulka Koofur Galbeed Soomaaliya Cali Saciid Faqi ayaa maanta magacaabay xubnaha Xildhibaanada golaha Wakiilada qabashada doorashada Aqalka Sare.Xubnaha uu magacaabay guddoomiye Faqi ayaa ka kooban 11 xubnood waxayna iska dhex dooran doonaan guddoomiye iyo ku xigeenkiisa.
Xubnahan ayaa ka shaqeyn doona sidii Xildhibaanada maamulka Koofur Galbeed u dooran lahayeen Xildhibaanada Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya oo ay deegaan doorashadooda tahay Koofur Galbeed.
Dowlad goboleedka Koofur Galbeed ayaa noqotay maamulkii labaad ee soo magacaaba guddiga Xildhibaanada ee qabashada doorashada Xildhibaanada aqalka sare, waxaana horay guddigan oo kale u magaacabay maamulka Jubbaland oo noqday maamulkii ugu horeeyay.
Wararka Maanta : Deg Deg: Fariinta MD Farmaajo & RW Rooble iyo Kiiska Ikran oo weji kale...
Sida uu qorshuhu ahaa maanta oo ay taariiqda ku beegan tahay 25/7/2021 ayaa lagu waday inay bilaabato doorashada Xildhibaanada Aqalka Sare balse ay dib u dhacday sababo la xiriira dowlad goboleedyada oo aan badi dhameystirin habraacii loo qaban lahaa doorashada Xildhibaanada Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Muqdisho (Wararka Maanta) – Ra’iisulwasaaraha Xukuumadda xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble iyo Madaxweynayaasha Dowlad Goboleedyada ayaa xalay wada hadalo khadka Zoom-ka ka yeeshay xaaladihii ugu dambeeyey doorashada Soomaaliya.
Wada-hadalka Rooble iyo Maamul Goboleedyada ayaa dood dheer ka yeeshay sidii loo dardar gelin lahaa doorashooyinka, Arrinta Somaliland, , Hirgelinta soo jeedinta Guddiga dib u heshiisiinta Gedo iyo xalinta caqabadaha weli ka jira doorashada.
Sida ay xogta sheegeysa wada-hadalka Xalay ayaa kusoo dhamaaday fashil, mana jirto wax natiijo ah oo laga gaaray qodobadii laga wada-hadlay.
Wararka Maanta : Daawo: Muuse Suudi oo ka digay arrin Farmaajo sameyn karo doorashada k...
Dhinacyada ayaa ku kala aragti duwanaaday arrinta Somaliland, waxaana soo ifbaxay in madaxda Maamul Goboleedyada ay dhexooda kala taageerayaan labada garab ee Siyaasiyiinta Somaliland kala hoggaaminayaan Cabdi Xaashi iyo Mahdi Guuleed.
Kulanka Xalay ayaa kusoo aadayo xilli Dib u dhac uu ku yimid Doorashada Senatarada Aqalka Sare BFS oo waqti ahaan loo asteeyay 25-ka July 2021 oo maanta ku began in ay lagu qabto Magaalooyinka Muqdisho, Jowhar, Dhuusamareeb, Garoowe, Baydhabo iyo Kismaayo.
Wararka Maanta : Samuel Umtiti Oo Xiiso U Qabin Heshiis Kordhinta Kooxda Barcelona
Guddiga Doorashooyinka Dadban ee Heer Federaal ayaa dhawaan xoojiyay habraaca lagu hagayo Doorashada Aqalka Sare, Golaha Shacabka & tan Madaxweynaha balse dib u dhaca jira uu sababi karo in uu isbadal ku yimaado jadwalka.
Axad, Luulyo, 25, 2021 (Wararka-Maanta) – Guddiga xallinta khilaafaadka doorashooyinka, ayaa soo saaray sharuudaha cabashooyinka aqalka sare, xilli maanta lagu wado in la shaaciyo guddiyada doorashooyinka iyo musharraxiinta aqalka sare.Guddiga ayaa sheegay in ay cabashada soo gudbin karaan, musharrax kaste oo buuxiyay sharuudaha, xildhibaanada dowlad goboleedyada iyo ergada dooranaysa wakiillada Soomaliland.
Guddiga xallinta khilaafaadka waxay sidoo kale sharuud maaliyaddeed oo dhan $3,000, ku xireen cid kaste oo doonaysa in ay cabasho usoo gudbiso.
Wararka Maanta : Kuuriyada Koonfureed oo ciidankeeda kala baxayso xeebaha Soomaaliya - ...
Muqdisho (Wararka Maanta) – Waxaa mar kale dib u dhac ku yimid markii saddexaad doorashada Aqalka Sare oo Guddiga Doorashada heer federaal uu shaaciyey inay bilaaban doonto 25-ka July, 2021 oo ku beegan Maanta.
Dib u dhacan ayaa la sheegay inuu ka yimid diyaar garow la’aan iyo cagajiidka Maamul Goboleeyada, waxaana ugu dhow Maamulka Jubbaland oo howsha Doorashada Aqalka Sare ay uga harsan tahay inuu Madaxweynaha maamulkaasi liiska Musharixiinta u gudbiyo Guddiga Doorashooyinka Jubbaland.
Wararka Maanta : Al-Shabaab oo weerar khasaare geystay ka fulisay BALCAD - Caasimada On...
Ilaa iyo hadda a jirto Liiska Musharixiin oo la hayo, waxaana sidoo kale fasax ku maqan Baarlamaanka Galmudug oo aan isu imaaneynin ka hor 1-da Ogost, mana muuqdo olole doorasho oo socda.
Arrintan waxay mugdi kale sii gelineysaa Doorashada Dadban ee Federaalka oo muddo dheer dib u dhacday, welina u muuqata mid jiitameysa.
Beesha Caalamka ayaa la sheegay inay shuruud ka dhigtay qabashada Doorashada Aqalka Sare si ay u bixiso dhaqaalaha doorashada, laakiin maamul Goboleedyada iyo Gudiyadooda ayaa doonaya in dhaqaale lagu siiyo Doorashada Aqalka Sare, taasoo beesha caalamka ay diidan tahay.
Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal (FEIT), iyo xubno la socda ayaa Shalay Magaalada Kismaayo u tegay dardar-galinta qabsoomidda doorashada Aqalka sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Axad, Luulyo, 25, 2021 (Wararka-Maanta) – Xoghayaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin ayaa sheegay in duqeymaha mareykanka ee lagu bartilmaameedsanayo Al-Shabaab ay xoojinayaan weerarada ka dhanka ah kooxda argagixisada ee xiriirka la leh Al-Qaacida.Hadalkaan ayaa u muuqday mid wasaaradda gaashaadhigga Maraykanka kaga jawaabayso qoraal kasoo baxay xildhibaan Ilhan Omar oo su’aallo ka keentay duqeymihii ugu dambeeyay ee Galmudug.
“Dhawaan waxa dhacay waxa weeye ciidamada aan iskaashiga leenahay ayaa kordhiyay howlgalladooda, waxayna dib u riixayeen Al-Shabaab,” ayuu Austin u sheegay wariyeyaasha isaga la safraya ee ku sugan saldhigga ciiddamada cirka ee Alaska.
Wararka Maanta : DEG DEG: Rooble oo xilalkii ka qaaday madax sare oo ka tirsan NISA + S...
Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa Al-Shabaab ku bartilmaameedsaday labo duqeyn oo dhacday 20-kii July iyo 23-kii July, ka dib muddo ku dhow lix bilood oo hakad uu soo galay markii uu talada la wareegay Madaxweyne Joe Biden.
Milatariga Soomaaliya ayaa loollan adag oo dhanka dhulka ah la galay Al-Shabaabkii ku sugnaa maamulka Galmudug, halkaas oo lagu bartilmaameedsaday labada duqeyn oo diyaaradaha Mareykanka ay fuliyeen.
Milatariga Mareykanka ayaa fuliyay 63 weerar oo cirka ah oo ka dhan ah Al-shabaab sanadkii 2019 iyo 53 duqeyn ah oo sanadkii hore ah.
Saraakiisha Mareykanka ayaa sharraxaad ka bixiyay gaabiska ku yimid duqeymaha iyagoo u cuskanaya dib u eegis maamulka Biden uu ku sameeyay siyaasadda duulimaadka militariga.
Dowladda Soomaaliya ayaa aad uga walaacsanayd duqeymo la’aanta taasoo kooxda Alshabaab u ogolaatay inay ka soo baxaan dhuumashada.
Wararka Maanta : Xildhibaan Maareeye: Guddoomiye Cirro wuxuu masuul ka yahay kala jabka ku...
Wararka Somali3 mins ago
Wararka Somali26 mins ago
Warka Caalamka2 hours ago
Wararka Videos2 hours ago
Caalamka Videos14 hours ago
Wararka Videos15 hours ago
Caalamka Videos18 hours ago
Wararka Videos21 hours ago
Qorshaha Axmed Madoobe uu kusoo saarayo Senataro taabacsan oo la is-ho…
Deg Deg: Kenya oo ka shalaysay Dagaalkii ay la gashay Somaliya & RW Rooble…